Mamita-tena ny mpitondra… | NewsMada
Mamita-tena ny mpitondra…
Mamita-tena amin’ny alalan’ny vola sy ireo fizarana kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro ireo sahirana izao fitondrana izao. Mihevitra izy ireo fa hahatazona azy eo amin’ ny toerany ny fanambatambazana tahaka izany. Sandaina vary sy menaka ary vola ireo vahoaka sahirana, nanotrona ny Andro afrikanina ho an’ny fahasalamana tetsy Mahamasina , omaly. Nokaramaina hilanja sora-baventy fanohanana ny fitondrana ny sasany tetsy amin’ny HJRA sy Mahamasina. Olona tsy resy lahatra amin’ny fanohanan ny nilanja izany fa noho ny vola fotsiny ihany. Hanehoana amin’ireo vahiny nanatrika teny an-toerana fa mbola maro mpanohana izao fitondrana izao. Nofendrofendrona indray koa ireo mpivarotra sy mivelona etsy amin’ny manodidina an’Analakely tamin’ny lahateny fa mijaly noho ny korontana ataon’ireo depiote… Fa iza ny nanakorontana teto, nanomboka ny 21 avrily lasa teo ? Ra mandriaka sy ratra ary fati-olona ny valin-kafatr’izao fitondrana izao raha mba nikasa ny hanao tatitra ny depiote. Tsy mpanakorontana sy namono olona ve izany ? Tsy mahagaga raha maneho izany amin’ny sora-baventy ny eny an-kianja fa mihosin-dra izao fitondrana izao.
Nambara tamin’ny lahateny sady tamin’ny feo avo koa fa tokony hohajaina ny lalàna ary anisan’izany ny lalàmpanorenana. Fa iza ny tsy nanaja izany teto ? Aiza izao ny Fitsarana avo natao hitsara ny mpitondra, tsy mbola tafatsangana hatramin’izao ? Tokony hapetraka anefa izany, araka ny voalazan’ny lalàna. Ohatra iray ihany iny, ankoatra ireo fanitsakitsahana lalàna miverimberina ataon’izao fitondrana izao.
Voalaza fa hoentina hitety faritra koa ity fizarazarana vary sy menaka ity, hamoriana vahoaka. Tsy mahay maka lesona amin’ny tantara fa mandika an-jambany sy zary maka tahaka ny hadisoan’ny teo aloha. Zatra “kopia kole” ka tsy mahagaga. Tsy nitondra nankaiza ny fomba fanao tahaka izany. Vao mainka aza namitaka ireo mpitondra nifandimby teto noho ny ataon’ireo tompomenakely sy tandapa ary ny di-dohan’ny mpitondra ka tsy nampaharitra azy ireo tamin’ny fitantanana firenena. Voa amin’ny ataony… mamita-tena rehefa namita-bahoaka.